Ao amintsika, ny fironana an-tserasera, dia mandray Joystick volamena | Androidsis
Aminay dia mandresy ny loka Golden Joystick 'Breakthrough Award' roa taona taorian'ny nanombohany
Este Golden Joystick izay nomba anay Ilay iray tamin'io lalao io no namaky ny ambiny, ary marina fa izany no izy, nanomboka tamin'ity fahavaratra ity dia nampihena ny tadiny ity fisalasalana marobe ity.
Ny mahatsikaiky amin'ity loka ity dia ny tsy lalao efa navoaka tamin'ity taona ity, fa efa roa taona sy tapany izay ao amin'ny Play Store, noho izany ny fandraisana io loka io dia voalohany indrindra.
ny Golden Joystick dia mety ho "Oscars" an'i Hollyword Inona no atao hoe gaming, ary niaraka taminay izy ireo nanomboka tamin'ny 1983. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny loka azon'izy ireo dia nanome anarana malaza teo amin'ny tantaran'ity sehatry ny fialamboly ity izay nanome anay fahafinaretana sy lalao nandritra ny ora maro.
Isika dia nahazo ny «Joythrough Award» Golden Joystick ho fomba iray hanazavana ny fironana izay tato anatin'ny volana vitsivitsy. Lalao efa nodinihinay sy nomenay en Jona ny loka ho an'ny lalao Android COOL be indrindra amin'ity volana ity; talohan'ny nipoahany tamin'ny volana aogositra naka fakana an-tapitrisany.
Novolavolan'ny Innersloth, Eo amintsika dia mitarika antsika ho lasa anisan'ny ekipa anaty sambo ary ao ny ampahany sasany manandanja indrindra dia "vaky" miafina mba hanohizana ny fitetezana ny habakabaka. Anjarantsika izany, raha mbola tsy isika ilay "bandy ratsy", mba hahalalantsika hoe iza ny ekipazy alohan'ny hamonoany antsika rehetra na tsy afaka manohy ny dia isika.
Lalao izay nahazo fampidinana an-tapitrisany ary mbola fironana hatrany. Ka ny Golden Joystick dia tsy te-hanadino ilay fotoana loka eo Aminay loka izay no entina miaraka amin'ny voninahitra rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Aminay dia mandresy ny loka Golden Joystick 'Breakthrough Award' roa taona taorian'ny nanombohany
Motorola Nio no finday voalohany manana tontonana 105 Hz